Amaphepha eWebhu aKhiwe ngokufanelekileyo Awakhiwe ngokusebenzisa iziLwimi eziThathu ezahlukeneyo
Imfuno yokuqala yephepha lewebhu ukuchaza umxholo wephepha lewebhu.
Oku kwenziwa ngokusetyenziswa kolwimi olungummiselo oluchaza ukuba yiyiphi inxalenye yecandelo lomxholo. Ulwimi oluqhelekileyo elisetyenziselwa ukudlulisa umxholo yi-HTML nangona i-XHTML ingasetyenziswa kwakhona ukuba awufuneki ukuba amakhasi asebenze kwi-Internet Explorer.
I-HTML ichaza ukuba yintoni umxholo. Xa kubhaliwe ngokufanelekileyo akukho nzame eyenziwa ukuchaza indlela umxholo okufuneka ukhangele ngayo. Emva koko, umxholo uya kufuneka ukhangeleke ngokwahlukileyo kuxhomekeke kwisiphi isixhobo esisetyenziselwa ukuyifumana. Izixhobo zefowuni zinezikrini ezincinci kuneekhompyutha. Iikopi eziprintiweyo zomxholo ziya kuba nobubanzi obunqamlekileyo kwaye azifuneki ukuba zonke iindlela zokuhamba zifakwe. Kubantu abaphulaphule iphepha, kuya kuba indlela iphepha elifundwa ngayo kunokuba libukeka njani lifuna ukuchazwa.
Ukubonakala kwephepha lewebhu kuchazwa usebenzisa i-CSS enokukwazi ukuchaza ukuba yiyiphi imidiya imiyalelo ethile efunekayo ukuze ikwazi ukwenza ukuba ifomathi ifomelwe ngokufanelekileyo naluphi na isicatshulwa iphepha.
Ukusebenzisa nje ezi ziilwimi ezimbini ungakha amaphepha ewebhu angagqibekanga aya kufumaneka kungakhathaliseki ukuba isiphi isixhobo esisetyenziselwa ukufikelela kukhasi. La maphepha asebenzayo angasebenzisana nomveleli wakho ngokusebenzisa iifom. Emva kokuba ifomu izaliswe kwaye ifakwe isicelo sibuyiselwa kumncedisi apho iphepha elitsha lewebhu elitsha liyakhiwa kwaye ekugqibeleni lilandelwe kwisiphequluli.
I-disadavantage enkulu yamaphepha ewebhu njengale ndlela yindlela enye kuphela ukuba isivakashi sakho sisebenzisana nekhasi ngokugcwalisa ifom nokulinda iphepha elitsha ukulayisha.
Ixesha lokusebenzisa i-AJAX ye-Asynchrone okanye i-Synchronous
Nakhu xa kufuneka usebenzise i-GET kunye ne-POST yee-Ajax Server Requests
I-ozone kunye nokufudumala kwehlabathi
Iimvumi ze-Metal ezinamandla kakhulu ze-1985
'I-Oliver Button i-Sissy' nguTomie dePaola